Fampahalalana novidina www.itstechschool.com na www.itstraining.in dia voatazona am-pahibemaso ary tsy alefa any amin'ny fikambanana misy antoko fahatelo amin'ny hetsika ara-barotra na fampiroboroboana.
Raha mampihatra na manontany momba ny fampiasana ny serivisinay na ny fampahalalana momba ny fianarana izahay ary mikaroka fampahalalana raha toa ka mizara ny adiresy mailaka amin'izany tranga izany dia mety mahazo mailaka imailaka avy aminay izahay mikasika ny tolotra omenay. Raha tsy te-hahazo ny e-mail ianao dia ampahafantaro anay info@itstechschool.com ary tsy hahazo mailaka avy aminay ianao.
Innovative Technology Solutions dia nanendry solontenan'ny mpivarotra mba hanome vaovao sy fomba fijery amin'ny fangatahana. Rehefa manontany ny ITS ianao, dia hoentina amin'ny solontenan'ny faritra misy anao ny valiny ary mety hahazo mailaka avy amin'izy ireo ianao mba hanomezana fanazavana misimisy kokoa.
Noho ny varotra an-tserasera sy ny fampiroboroboana fampiasana mailaka dia mampiasa ny spam filters, mety mety tsy ho tonga any aminao ny mailaka. Mba hahazoana antoka fa tsy tokony halefa ny fangatahantsika, dia mandefa mailaka manaraka (mampiasa adiresy mailaka hafa admin@itsgroup.in in case we do not receive a read report or a reply to our email.
Mampiasa cookies ny fitsangatsanganana teknolojia Innovative, manamarina ny pikila sy ny teknolojia mifandraika amin'izany. Mampiasa cookies izahay na ny antoko fahatelo noho ny tanjona samihafa, anisan'izany ny fanatanterahana sy famoronana ny tranonkala. Azonao atao ihany koa ny mampiasa cookies mba handinihanao ny fomba ampiasanao ilay tranonkala handefa ny dokam-barotra ho anao amin'ny tranokala hafa.
Ny fampahalalana rehetra amin'ny karatra / debitina rehetra sy ny mombamomba ny olona manokana dia tsy ho voatahiry, amidy, zaraina, nokarakaraina na nandoa vola tamin'ny antoko fahatelo.
Mety hovana na hivoatra indraindray ny Fitsipiky ny Website sy ny Terms and Conditions mba hahafeno ireo fepetra sy fenitra. Noho izany dia ampirisihina ny mpividy mba hitsidika matetika ireo fizarana ireo mba hahafahana manavao ny fanovana ao amin'ny tranonkala. Ny fanovana dia ho tanteraka amin'ny andro navoakany.
Ny sasantsasany amin'ireo dokam-barotra hitanao ao amin'ny tranokala dia nofantenana sy natolotry ny antoko fahatelo, toy ny tambajotra an-tserasera, mpandraharaha dokam-barotra, dokam-barotra ary mpanome tolotra an-tserasera. Ireo antoko fahatelo ireo dia afaka manangona vaovao momba anao sy ny hetsika ataonao an-tserasera, na ao amin'ny tranokala na amin'ny tranonkala hafa, amin'ny cookies, cybercafés sy ny teknolojia hafa amin'ny ezaka hahafantarana ny tombontsoanao ary manome anao dokam-barotra izay mifanaraka amin'ny tombontsoanao. Mahatsiaro azafady fa tsy manana fidirana na fanaraha-maso ny fampahalalam-baovao izay mety horaisin'ireo antoko fahatelo ireo. Ny fomba fampahalalam-baovao an'ireny antoko fahatelo ireny dia tsy voararan'ity politika momba ny fiainana manokana ity.
Ny fifandirana na fitarainana entina na amin'ny fifandraisan'ity tranonkala ity dia hotontosaina sy hajaina araka ny lalànan'i INDIA
India dia tanindrazantsika.
Raha mandoa vola amin'ny vokatra na ny serivisy ao amin'ny tranokalanay ianao, ny antsipiriany hangatahana dia homena mivantana amin'ny mpividy entana amin'ny alalan'ny fifandraisana azo antoka.
Ny tompom-pananana dia tokony hitazona dika mitovy amin'ny antontan-taratasim-pandraharahana sy ny politikan'ny mpivarotra sy ny fitsipika.
Mandray vola amin'ny aterineto izahay amin'ny fampiasana karatra amin'ny banky Visa sy MasterCard amin'ny USD, GBP, EUR, AED & INR.
Raha vantany vao voavidy ny saram-pisoratana anarana, dia tsy hisy famerenana.
Ny fiampangana tsy tapaka dia tsy azo averina.
Ny famerenana amin'ny laoniny dia tsy atao afa-tsy amin'ny alalan'ny "Mode Mode de Payment".
Ireo saram-pianarana dia azo averina aloa rehefa mahazo valiny amin'ny ora fampiofanana 4.